Madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya Daniel arap Moi oo geeriyooday. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya Daniel arap Moi oo geeriyooday.
Madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya Daniel arap Moi oo geeriyooday.
Nairobi (Halqaran.com) – Madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya Daniel arap Moi ayaa geeriyooday isagoo ay da’diisu ahayd 95 jir.
Geerida Moi ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweyne Uhuru Kenyata isagoo ka hadlayay Idaacadda dowlada talaadadii.
Moi, oo xukumay dalka Kenya muddo 24 sano ah, ayaa ku jiray isbitaal muddo bil ka badan.
In kasta oo lagu dhaleeceeyo inuu ahaa kaligii taliye, ayaa Moi wuxuu taageero xoog leh ka helay dad badan oo reer Kenya ah, waxaana loo arkayay inuu ahaa mid dadka isu keenay markii uu xukunka qabtay ka dib markuu uu geeriyooday Madaxweynihii ugu horreeyay Kenyna ee Jomo Kenyatta 1978-kii.
Madaxweyne Daniel Toroitich Arap Moi waxaa uu dhashay 2-dii bishii Sabtembar ee sanadkii 1924, waxaa uu na kana soo jeeda qowmiyadda Kalenjinta ee degta galbeedka wadanka Kenya.
Daniel arap Moi ayaa inta uusan madaxweyne noqonin waxaa uu horay usoo noqday madaxweyne ku xigeen sannadkii 1967-dii, waxaana xilka Madaxweynenimo loo dhaariyay sanadkii 1978.
Madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya Daniel arap Moi oo geeriyooday